Madaxweyne Muuse Biixi:- Sida Uu Uga Badbaaday Xabsiga | Gaaroodi News
Madaxweyne Muuse Biixi:- Sida Uu Uga Badbaaday Xabsiga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa sideedamaadkii ka badbaaday in xabsiga loo taxaabo xilligii ay jirtay dowladdii kacaanka.
Amar ka yimid madaxweynihii Dawladdii Kacaanka ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre, ayaa ahaa in mar kale la soo xidho mid ka mid ah sarkaalladii ciidanka cirka ee xilligaas Colonel Muuse Biixi Cabdi, oo maalmo yar ka hor xilligaas oo ahayd 1983 laga soo daayey xabsiga Boolisiyo Millataare.
Xadhigga hore, Muuse Biixi iyo nin kale oo lagu magacaabo Qamariye ayaa la xidhay 1982-83-gii iyada oo xilligaas la xidhxidhayey saraakiil ka soo jeedday gobolladii waqooyi oo loo arkeyey in ay ahaayeen Kacaan Diid. Gaar ahaan, saraakiishan ayaa lagu eedeeyey in Generaal Gaanni oo xabbado lagu ridey xilligaas isaga oo Hargeysa joogo in ay ka dambeeyeen. Afar bilood kaddib se waa la soo daayey markii ay dadaal badan sameeyeen xubno sarsare oo asxaab la ahaa, mana ay dhicin in la sii gudbiyo ama maxkamad la soo taago labadoodiiba.
Markaa kaddib Muuse wuxuu codasaday in waxabarsho loogu diro Maraykanka, intii se hawshii uu ku jirey ayaa uu soo baxay amarka kale ee ah in mar kale la soo xidho. Waxaana halkaa bilaabatay xaalad halis ah oo ay tahay ma la xidhi doonaa? Mise Maraynka ayuu waxbarasho u doonan doonaa?
Sidee ayuu ku ogaaday amarka xadhiggiisa?
General Ibrahim Adam Xaal Xaal, oo ahaa xilligaa Madaxa Guud ee Hoggaanka Siyaasadda Ciidanka ayaa ogaaday warka ah in saaxiibkii Muuse Biixi uu soo baxay amar xadhig ah oo ka yimi madaxweynaha.
“Markii amarkii soo baxay ayaa anoo xafiiska fadhiya ayuu qof muhiim ihi ii soo galay, wuxuuna ii sheegay arrinta cusub ee Muuse khuseysa, run ahaan waan naxay laakiin go’aan degdeg ah ayaan qaatay. Waxaan aaday gurigi Muuse, albaabka ayaan garaacay, waxa iga furtay xaaskiisa, markay ii aragtay wey naxday madaama aanaan weligay gurigood soo gelin!”
Muuse ayaa la yaabay hadalka uu saaxiibkii u sheegay isagoon fileynin in la xiro.
“Wuu naxay laakiin si deggan ayuu go’aan geesinnimo ah u qaatay, wuu soo lebistay , waanuna is raacnay isago soo kaxaystay baabuurkiisi meel bannaan ah baan tagnay waxaan u sheegay sidii wax u jireen, waannuna tashannay. Waxaanan isla garanay inuu si qarsoodi ah dalka uga baxo weliba isla caawa.” ayuu sheegay Gen Ibraahin Doolaal u sheegay BBC-da.
Muuse Biixi waxaannu ku ballannay ayuu yidhi Doolaal in “uu gurigayga yimaaddo oo aanu kiisa tegin, maadaama laga baadhi doono kiisa oo ay suuragal tahay in la qabto.
Gen Ibraahim Doolaal
Xilligaas warku soo baxay Muuse ma haysto baasaboor visa, tigidh, iyo fasax u ku dhoofoba keliya waxa uu haysta warqaddii aqbaalaadda ee waxbarashada ee Maraykanka.
Sida uu sheegay Doolal markaas kaddib ayaa ay u hawl galeen sidii ay ku heli lahaayeen, iyaga oo qorsheynaya in uu 24 saac gudahood uu dalka kaga baxo, inta kalena uu dhuumaalaysto inta hawsha la dhammaynayo. Markaas kaddib ayaa baasaboor loo soo sameeyey sida uu sheegay Doolaal.
Muuse Biixi waxaannu ku ballannay ayuu yidhi Doolaal in “uu gurigayga yimaaddo oo aanu kiisa tegin, maadaama laga baadhi doono kiisa oo ay suuragal tahay in la qabto. Waxaanan ku heshiinnay in uu galo xafiiski is kaashiga militeriga ee Maraykanka oo gargaar weydiisto”.
Muusena waxa uu tegay safaaradda Maraykanka isaga oo u sheegay sida xaal yahay iyo in la doonayo in la xidho. Safaaradda oo xilligaas weydiisay sida uu ku ogaaday in la xidhi doono, waxa uu u sheegay in saaxiib uu ku leeyahay madaxda sare uu u soo sheegay.
“Kornaylkii haystay xafiiskaas ayaaa i soo wacay saddex jeer baan ku idhi ‘fadlan caawi'” ayuu yidhi Doolaal.
“Habeenkii aniga oo debedda jooga ayaa xaaskaygii oo ogayd arrinka Muuse Biixi isoo wacday, ii sheegtay in baasaboor, fiisa iyo tikidhba loo helay Muuse oo uuba aaday dhankaa garoonka diyaaradaha, oo caawa uu ku qoran yahay diyaaradda”
“Mar kale ayaan go’aan gaadhay. Anigu nin VIP ah ayaan qoranahay, oo kolka madaxweyne la soo dhaweynayo anigaa qaabbilsan oo ciidanka garoonkaba maamula xilliyadaas. Madaaama uu u baahna cid garoonka dhaafisa illeen ciidammadii hangashta ayaa jooga e.” ayuu yidhi Doolaal. Generaal Doolaal iyo weriyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa oo jigjiga kula kulmay.
“Toos ayaan garoonka u imid waxaanan ka soo galay qaybti VIP-da waxaanan u gudbey qaybta immigration ka, saa waa Muuse oo ay ag taagan yihiin askarti Hangashta ee ciidanka oo shandada ay la wadaan sidii sarkaal dhoof caadi ah u socda! Sarkaalkii immigration ayaa i yidhi taliye maxaan qabanaa?? Maxaad sarkaalkaas “kuyuuga ugu heysaan”, waar soo dhaqaaq baan ku idhi hawshii baa looga gaadhsiiyey , kooxdii Hangashna markay ii arkayn way caawiyeen, alaabtii bay la qaadeen. Runti isaga degganaansho ayaa ka muuqday laakiin anigu culeys ayaan dareemaayey.” Ayuu sii raaciyey Doolaal hadalkiisa.
Ma dhoofay mise waa la qabtay?
Markii uu soo gudbay haddana waxaa dhacay dhacdo kale, sida uu sheegay Doolaal, maalinkaas waxaa isna garoonka laga dhoofinayaa Sheekh Cali Suufi oo ahaa sheekh weyn, qaar ka mid ah wasiirradana soddog u ahaa. Intii aanay kicin diyaaradii Muuse laakiin safkii lagu jiro ayaa waxa yimi garoonka wasiirro uu hor kacayo Cali Samatar, wasiirkii gaashaandhigga ee ogaa amarka xidhitaanka Muuse Biixi. Waxay Muuse oo waraysi uu kal hore bixiyey ku sheegay in uu ka naxay oo mooday in ay diyaarad wada raaci doonaan, laakiin markii uu u ogaaday hawsha ay u socdaan ay neefi ka soo baxday oo sida diyaaraddi iyo safarkiisii ugu xasilay, illaa intii uu ka gaadhayey Maraykanka. Waxaana Muuse waraysigaas ku sheegay in uu haystay keliya 20 doollar oo uu rabay in uu tareenka iyo guriga uu ku degi doono ku gaadho.
“Waxaan ka daawanayaa birta u dhaw dhinaca VIP-da illa intaa diyaaraddu kacayso, isaguna toos uun buu u baxayey, waxaa ila taagan oo ii sheekaynaya odaygan madaxweynaha hadda dalka [Soomaaliya] aabbihii Cabdillaahi Farmaajo oo xilligaa ahaa madax duulista iyo hawada isaga oo i leh ‘halkaa waannu bannaynay, laydhadhkaa garoonka waannu hagaajinnay’ madaama ay habeen ahayd anna waxaaba uma jeedo ee Muuse ayaan hubinayaa in uu baxo” ayuu yidhi doolaal.
Maxaa dhacay intii ka danbaysay?
Markii la ogaaday in Muuse xaxay waxaa loo qaatay in aanu arrinta xadhiggiisa ee uu waxbarashadii u baxay, waxaana la isku deyey in la soo celiyo sida uu sheegay Doolaal, laakiin ma suuragalin maadaama Muuse iyo Maraykankuba ogaayeen sababta uu baxay. Sidaas ayaa Muuse Biixi uu ku soo dhammaystay waxbarshadisii oo qaadatay laba sano, markaa kaddibna waxa uu ku biiray SNM, isaga maantana ah madaxweynaha Somaliland oo loo doortay bishii decmber sannadkii 2017.
Taariikhda Muuse Biixi oo kooban
Muse Biixi Cabdi sida oo kale waa guddoomiyaha xisbiga talada haya Somaliland, wuxuu ku dhashay miyiga Hargeysa 1948.uxuu u sheegay BBC-da in uu waxabarashadiisii Quraanka, dugsiga hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada Hargeysa. Dugsiga sare ee Cammuud ee Borama ayuu ka qalin jebiyay 1970-kii.
Ka dib wuxuu ku biiray ciidamada cirka ee Soomaaliya. Sanadihii 1970 illaa 1973, wuxuu tababar sarkaalnimo siiyay Midowgii Soviet.
Markii uu ku soo noqday dalka, wuxuu ka hawlgalay saldhigyadii ciidankii cirka ee Balli-doogle, Baydhabo iyo xaruntii dhexe ee ciidankaasi ee muqdisho.
Muse Biixi Cabdi wuxuu 1981 ilaa 1982 tababar ku qaatay saldhigga milliteriga Mareykanka ee gobolka Ohio kaas oo lagu magacaabo “Dayton Air Base”.
Korneyl Muse biixi Cabdi ayaa sidoo kale tababar ku qaatay sakadeemiyada gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ee lagu magacaabo “Fort Lee”, sanadihii 1983 illaa 1985.
Muse Biixi Cabdi, markan kuma noqon Somaliya ee wuxuu toos uga degay Ethiopia 5 May sanadkii 1985. Wuxuu ku biiray jabhaddii SNM ee dagaalka kula jirtay dawladdii Maxamed siyaad Barre
Korneyl Muse Biixi oo ka mid ahaa taliyayaashii ugu magaca dheeraa SNM, markii dawladdii dhexe ee Somaliya burburtay ee Somaliland na goonni isu taagtay, wuxuu 1993dii noqday wasiirkii Arrimaha gudaha Somaliland ee dawladdii Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Wuxuuna wasaaraddaasi hayay muddo oo uu ku soo can baxay.
Muse Biixi wuxuu ka mid noqday gudigii fulinta, markii la aasaasay Xisbiga Kulmiye bishii may 2002-dii, isagoo gudoomiye kuixigeenka kowaad loo doortay 2008.
Qoraalka Muuqaalka,Madaxweyne Muusa Biixi oo la hadlay BBC Somali
Muse Biixi waxaa gudoomiyaha xisbiga talada haya ee Kulmiye loo doortay 10 nofembar 2015-kii, ka dib shirweynihii xisbiga, waxaana loo xushay in uu noqdo musharraxa xisbiga.
Muuse biixi wuxuu leeyahay laba xaas iyo todoba caruur ah; Saddex wiil iyo afar gabdhood